Manchester United oo qarka u saaran in ay Ceyriso Phil Jones iyo Chris Smalling | Ciyaaro Online
Home - CIYAARAHA CAALAMKA - Manchester United oo qarka u saaran in ay Ceyriso Phil Jones iyo Chris Smalling
Manchester United oo qarka u saaran in ay Ceyriso Phil Jones iyo Chris Smalling
Jose Mourinho ayaa isu diyaarinaya in uu is beddel geliyo kooxda Manchester United hannaankeeda difaaca marka la gaaro Suuqa kala iibsiga ee Bartamaha — iyadoo Chris Smalling iyo Phil Jones labadaba beddel loo raadsanayo.
United tababaraheeda Mourinho ayaa indhaha ku haaya suuqa si uu uga soo helo difaac dhexaadyo Cusub, jeer Smalling iyo Saaxiibkiisa difaaca England ee Jones ay halis ugu jiraan in ay boosas ka waayaan kooxda xataa haddii aan la raacdeyn.
Mourinho ayaa aad uga carooday wixii kooxdiisa ku dhacay kulankii Axadda ee 1-0 ay ku garaacday kooxda Newcastle, taasoo baqdin weyn ku abuurtay booskiisa 2aad, markii Liverpool, Tottenham iyo Chelsea ay soo wada adkaadeen 4-ta Sarena ay ku dagaalameen kasii mid ahaanshaheeda.
Khasaarahaas oo ku qabsaday garoonka St James’ Park Mourinho kooxdiisa waxaa uga jabay rikoodhkii difaac wanaagga ee Premier League, iyadoo 1 gool wax ka yar kooxda hoggaamiyeyaasha ah laga dhaliyay.
Mourinho ayaa indhaha ku haya Liverpool iyo City oo bixiyay £75million iyo £57m si ay usoo iibsadaan difaac dhexaadyada kala ah Virgil van Djik iyo Aymeric Laporte bishii lasoo dhaafay, maamulka sare ee United ayaana lagu wargeliyay in ay billaabaan soo iibsiga xiddigo suuqa dambe oo difaacyo laga keenayo.